Ndụ Social Media Life | Martech Zone
Ihe omuma ihe omuma a dabara na uzo anyi na etinye maka ndi ahia anyi elekọta mmadụ mgbasa ozi gị n'ụlọnga:
Monitoring - anyị na-enyocha ma ika na ụlọ ọrụ iji soro ndị ahịa anyị.
Tụlee - anyị na-enyocha akara ahụ iji mata aha na mmetụta ọ bụla. Anyị na-enyocha ụlọ ọrụ ahụ iji chọta ohere, nyochaa ndị asọmpi ma nyere aka mepee atụmatụ.
Na-arụkọ ọrụ ọnụ - itinye ego nke ndi n’aju n’ime usoro gi nile bu isi. Nkwalite nke otu onye site na nke ọzọ, na ịmepụta usoro ndị na-etinye ike nke onye ọ bụla na-etiti bụ nnukwu usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
iwekota - Social media bụ ọrụ siri ike… ya mere ịchọta ohere iji rụọ ọrụ na ịkọ akụkọ dị mkpa iji belata mmetụta nke ihe ndị dị mkpa. Ka oge na-aga, ịmepụta na ijikọta usoro gị ga-ewe ụfọdụ nsogbu ịma aka site n'ubu gị ma ị nwere ike ilekwasị anya na ịmezi usoro gị.
The infographic n'okpuru sitere n'ike mmụọ nsọ si UberVu ọcha akwụkwọ, na 4 Ogidi nke Social Media .ga nke Ọma. Lelee ya iji hụ ụfọdụ ihe na-atọ ụtọ banyere otu ndị ahịa ndị ọzọ na-eche maka ogidi 4 a nke mgbasa ozi mmekọrịta - enwere ọnụọgụ ụfọdụ na-atọ ụtọ ma na-enweghị isi na ebe ahụ.
Tags: Facebooksocial media ndụTwitterịbervu
Judy Caroll dee
Feb 12, 2012 na 11:03 PM
Douglas na-enye aka. Social media abịawo ogologo ụzọ. Anyị anụbeghị banyere ya na mbụ, mana nke a bụ ihe ndị mmadụ na-enweghị ike ibi ma ọ bụrụ taa.